ဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ်
Posted by Shar Thet Man on Jan 17, 2017 in Copy/Paste |5comments
တမင်ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ (11:11)ဆိုတဲ့ဂဏန်းနှစ်လုံးတွဲကို နာရီတွေ၊billboards တွေနဲ့အထူးသဖြင့် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်ရင်း ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့Screenပေါ်မှာ ဂဏန်းနှ စ်လုံး ဥပမာ (02:02)ကိုမြင်ရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို သတိရနေ တာဆိုတဲ့ အယူရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် (11:11) မှာတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး နက်ရှိုင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံးအချိန်ဆိုတာကို သတိတရ ရှိအောင် ပြနေတာဖြစ်ပြီး၊စာရေးသူတို့ရဲ့ စိတ်အာရုံ၊အတွေးတွေနဲ့ခံစားချက်တွေ ကို ဆွဲခေါ်နေ တာလို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ သဘာဝတရားဆိုင် ရာသဘော တရားတို့အပေါ်တည်မှီဟန်မရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်Doreen Virtue က11:11 ဆိုတာဟာ အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေကို ဆက်ထိန်း ထားဖို့ angels တွေကအချက်ပေးနေတာ၊ပြနေတာဖြစ်ပြီး၊ angels တွေက ဆက်ပြီး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတာကို ပြောပြ ပေးနေတာလို့ ဆိုပါတယ်။ (1)ဆိုတဲ့ဂဏန်းဟာ တခြားဂဏန်းတွေနဲ့မတူပဲ လူသားတွေနဲ့ angels တွေ ကြားက ပတ်သက်မှု ဆက်နွယ်မှု ပိုခိုင်မာလာတာကို ပြချင်နေတာလို့ ပြော ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့သင့်မြတ်စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းတွေကို ခေါ်ဆောင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Mayan ပြက္ခဒိန်အရဆိုရင် December 21, 2012 ၊ 11:11 မှာ ကမ္ဘာကြီး ကို အသက်အသစ်သွင်းပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။Dark Age (အမှောင်) ကနေGolden Age(ရွှေရောင်)အဖြစ် ပြောင်းလဲ အသက်သွင်း တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အနာရောဂါကုသပေးသူနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ( 11:11 )ဆိုတာ နတ်ကောင်း၊နတ်မြတ်တွေက ကမ္ဘာကြီးကို ကူညီဖို့ ပြန် လာ နေတာကိုပြနေတာလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် 11:11 ဆိုတာ Angels တွေက အခုကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာ၊ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့ လမ်း မှန်ကန် တယ်ဆိုတာကို တစ်ဖက်လှည့်နည်းနဲ့ အသိပေးနေတာ၊ သူတို့ကအနား မှာ စောင့်ရှောက်ကာ ကွယ်ပေးနေတယ်၊ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အသိပေးနေ တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကတော့ (11:11)မှာ ထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝလွန်စွမ်း အားရှိ တာေ ကြာင့် အဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့အခါ ဆုတောင်းရင် ပြည့်တယ်လို့ မှတ်ယူကြ တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Shar Thet Man has written 350 post in this Website..
ဆယ့်တစ်နာရီနဲ့ဆယ့်တစ်မိနစ်လည်း… သူ့ဘာသာ မနေရ
ဒီဇိုင်နာအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့.. နာရီတွေကို ကြော်ငြာအတွက် ဓာတ်ပုံရိုကရင်.. ၁၀နာရီ ၁၀မိနစ်.. ၃၅စက္ကန့နေရာလောက်ထားတတ်ကြတယ်..။
လက်တန်အတိုအရှည် ဘဲလန့်စ် မျှပြီးလှတာကိုး..။
အဲ့ နာရီလေး လိုချင်မိ ?
ကိုယ်​တိုင်ရေးစာ မဟုတ်​သည်​များကို copy/paste category အောက်​မှာ တစ်ချက် ထားပေးပါလို့
P.S. ရွာစည်အောင် တစ်​ဖက်​တစ်​လမ်းက ကူပေးနေလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ
ဒီစာကို ဖိုးသူတော်မှာ ဖတ်မိကတည်းက ပြုံးဖြစ်သေးတာ….
ဒီလို Angel တွေ စောင့်ရှောက်တာတို့ ဆုတောင်းလို့ရတာတို့ကို ဗိုလ်ချုပ်တို့ ခေတ်ကတည်းက သိကြရင် ကောင်းမယ်..။
အပင်ပန်းခံစရာ၊ အငတ်ခံစရာ၊ အသေခံစရာမလိုတော့ဘူး…
11:11 မိနစ်တိုင်း တစ်နေ့ကို နှစ်ခါ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ထိုင်ဆုတောင်းနေရုံပဲ…။